LEGO Boost Move Hub: Koodh midabaynta LED, dib u dejin iyo in ka badan - Ikkaro
Inicio >> Alaabada >> Lego Boost Move Hub
El Qalabka Lego-ga ee loo yaqaan 'Lego Boost' waxay ku saleysan tahay saddex qaybood oo firfircoon, oo hareerahooda oo dhan inta kale la soo ururshay.
Tan ugu muhiimsani waa Move Hub oo ka kooban matoor leh 2 faasas iyo moduleka Bluetooth si uu ugu xirmo kiniinka ama mobilada. Maaddaama wax kasta oo ku jira Boost lagu sameeyo barnaamijkeeda.
Labada qaybood ee kale waa matoor labaad iyo dhawaansho iyo midab dareemayaal.
Tan iyo markii aan ka helay macluumaad yar oo ku saabsan lebenkan, waxaan ku dhaafayaa wax kasta oo aan ka helo halkan waxaanan u maleynayaa inay xiiso leedahay in si fiican loo isticmaali karo.
Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad ogaato xirmada oo aad aragto waxa i joojinaya, igu xardho Tilmaamaha Kordhinta LEGO
Dhaqdhaqaaq Hub Code LED
Move Hub wuxuu leeyahay badhan cagaaran iyo LED ah oo tilmaamaya gobollo kala duwan, laakiin kamaan helin macluumaadkaan barnaamijka la heli karo. Marka, raadinta kadib, inta udhaxeysa bogga rasmiga ah iyo GitHub, Waxaan kuu daayay isku duwida waxa midab kasta oo midabkeedu yahay
Biligleynaya nal cad oo leh nal gaagaaban. Waa qaabka pareo. Riixitaanka badhanka cagaaran wuxuu isku dayayaa inuu ku xirmo Bluetooth 20 ilbiriqsi
Laydh cad oo bilig bilig dhalaalaya leh. Qalabka ayaa dib u dajinaaya
Iftiin buluug joogto ah Bluetooth waa lagu xiray wax walbana si fiican ayey u shaqeeyaan
Nalka liinta dhalaalaya Batariga yar. Xaaladdan oo kale waxaa jira 6 baytariyada AAA (LR03 at 1,5V)
Casaan, cagaar, buluug nalka dhalaalaya. Codsiga kiniinka ama mobilada ayaa ku qasbay cusbooneysiinta qalabka Move Hub. Midabka bilig-wareegga ayaa is beddeli doona. Sida laga soo xigtay bogga rasmiga ah cusbooneysiinta firmware waa inaysan qaadan wax ka badan 15 daqiiqo.
Waan ognahay taas Mid ka mid ah qodobada daciifka ah ee xirmadaan 'LEGO' waa dukumiintiyadeedii. Waxaan rajeynayaa in mar dhow baytariyada la dhigo oo ay ka dhigaan mid la heli karo oo la heli karo.
Sida dib loogu celiyo Move Hub
Sida looga hadlay dhabarka boodhka ku soo dhaca sanduuqa, faragelinta xoog leh ee elektromagnetic waxay carqaladeyn kartaa shaqada caadiga ah ee badeecada. Hadday sidaas tahay, dib u deji badeecada oo sii wad isticmaalkeeda si caadi ah.
Aynu dib u dhigno. Tanna tan sawirka ah ayaa nalagu boorriyay riix oo hayso badhanka Hub cagaaran 10 ilbidhiqsi.
Sida loo ogaado haddii qalabkeygu la jaan qaadayo LEGO Boost
Sida loo beddelo baytariyada
Qeybta hoose waxaa ku yaal dabool leh fur. Kaliya waa inaad iska furfuraa oo ka saartaa baalka la socda saddex nooc oo baytariyada AAA ah, taasi waa, 6 baytariyada.
Waxay u egtahay sawirka
Xusuusnow in aan daabacnay xeelad loogu talagalay qasbi xiriirka Bluetooth, marka aadan rabin inaad isbarbar dhigto.
Waxaa laga yaabaa inaad daneyneyso:
LEGO Boost kuma xidhi doonto Bluetooth
Waa maxay LEGO Boost
Sida loogu furo mobilada shaashad jaban
Mawduucyo cusub iyo jihada cusub ee shabakadda
Waxaan ku laabanayaa kanaalka YouTube si aan u kabo macluumaadka
Sida loo rakibo barnaamijyada APK-ka Android
Sida loo waafajiyo hawo-mareenka ceelka ...
Sida loo sameeyo baraf macmal ah
Categories Elektronik, Alaabada Tigidhka tigidhka
Sida loo ordo faylasha .sh
1 Dhaqdhaqaaq Hub Code LED
2 Sida dib loogu celiyo Move Hub
3 Sida loo beddelo baytariyada
4 Mowduucyo kale